Ihe niile banyere Dihydroboldenone
1.Wa bụ Dihydroboldenone / DHB? 2. Dihydroboldenone / DHB usoro onunu
3.Dihydroboldenone / DHB okirikiri 4.Dihydroboldenone / DHB results
5.Dihydroboldenone / DHB mmetụta utịp 6.Dihydroboldenone / DHB ọkara ndụ
7.Dihydroboldenone / DHB maka ịcha 8.Dihydroboldenone / DHB maka bulking
9.Dihydroboldenone / DHB uru 10.Dihydroboldenone / DHB nyocha
11.Dihydroboldenone / DHB maka ire ere 12.Dihydroboldenone / 1-Testosterone maka bodybuilding
1. Kedu Dihydroboldenone / DHB?
Dihydroboldenone (65-06-5) ọtụtụ n'ime ha na-ezo aka DHB bụ steroid siri ike nke na-enyepụta nsonaazụ ọma nye ndị na-arụ ọrụ, ndị ọgba ọsọ, na ndị na-agba ígwè. Ọtụtụ ndị na-agbagha DHB na Methyl 1-ule dị ka aha aha ya bụ 1-testosterone. Otú ọ dị, ọgwụ abụọ ahụ dị iche, ha abụọ na-ebute ihe dịgasị iche na mmetụta ndị ọzọ. A maara ọgwụ ọjọọ n'etiti ndị steroid kachasị ike na-enye ndị ọrụ ya nsonaazụ ọma. Dihydroboldenone bụ 5-alpha belata Boldenone nke bụ ihe kpatara aha ya. Ihe niile I Kwesịrị Ịma Banyere Anavar (Oxandrolone) maka Bodybuilding
N'iji tụnyere testosterone, DHB bụ ugboro abụọ anabolic na obere androgenic. Otú ọ dị, ọ pụrụ ịbụ na ọ gaghị adị mfe ikpebi ọgwụ ọjọọ ndị ahụ n'ihi na ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-ahọrọ iji Primobolan. A maara Dihydroboldenone maka iwuli elu ahụ ike, mee ka ha sie ike ma melite ike ahụ dum. DHB akwa njirimara ike anabolic na-enyere onye steroid aka ịbịpụta mmetụta na-adabere na ya ma nwee mmetụta dị ole na ole. Ọgwụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na ọrụ SHGB n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Mgbe a na-eme ya n'ụzọ ziri ezi, steroid na-eme ka mmepụta ahụ nwee ahụ n'ahụ nakwa ka ọ na-esiri ha ike. Maka ozu ahụ, ị ​​ga-eso ya rụọ ọrụ ziri ezi iji nweta ihe kachasị. DTH bụ hormone a na-ahụ anya nke na-apụta n'ime ahụ gị mgbe ị gbanwechara testosterone. Dịka ụfọdụ steroid ndị na-esonarị n'ime usoro ahụ dị na DTH na DHB, testosterone na-agbanye n'ime estrogen na DTH. Dabere n'ụdị ojiji gị, dọkịta kwesịrị ịduzi gị n'ịchọpụta ihe ziri ezi. Iji mee nke ọma, a ghaghị ịme nyocha ahụike n'ihu na mgbe ọ gwụchara nke mbụ. Ahụ mmadụ na-emeghachi dị iche iche na ọgwụ ndị ọzọ ka ndị steroid, ya mere nlekọta nlekọta ahụ ike dị oké mkpa maka nsonaazụ dị mma.
Dihydroboldenone (65-06-5), dịka ndị ọzọ na-eme steroid na-arụ ọrụ dị mkpa n'inyere ndị na-eme egwuregwu aka iru ihe mgbaru ọsọ ha site n'inye ike na ịzụlite ahụ ike. Ọgwụ ọjọọ nwere mmetụta dị ntakịrị mmetụta nke na-eme ka ọ dị mma maka ọtụtụ ndị na-ahụ maka ahụmahụ. Dihydroboldenone pụtara n'ụzọ dị ukwuu na ọ bụ ike nke inye ụbụrụ dị ukwuu na ndị ọrụ ya. Ọgwụ ahụ adịghị eme ka njigide mmiri dị na mọzụlụ ma nwee mmetụta nke aromatization. Na nkenke, ọ bụrụ na ị na-achọ onye steroid nke ga - enyere gị aka nweta ahụ ike ma melite arụmọrụ gị, DHB bụ onyinye kachasị mma maka gị.
Nanị ihe kachasị mkpa ndị ọrụ Dihydroboldenone nwere, bụ ihe mgbu nke na-ekwesịghị ime ka ị ghara iji ngwaahịa ahụ tụnyere ihe ọ na-enye. Ọgwụ ahụ na-enye ike mmadụ nke na-enyere ndị ọrụ aka ịrụ ọrụ ruo ọtụtụ awa ma nweta nchọta ahụ achọrọ. Ndị na-agụ egwú na-enwetakwa ikike zuru ezu iji na-eme ihe ma na-asọ mpi n'oge asọmpi. Ndị ọrụ ụfọdụ na-eme mkpesa maka ihe mgbu ruo na 7 ụbọchị mgbe injections. Otú ọ dị, dọkịta gị nwere ike inyere gị aka ịchịkwa nsogbu ahụ, ma iji mmanụ grapeseed dị ka sterilizer nwekwara ike inyere aka. E wezụga nke ahụ, ọgwụ ahụ na-anọgide na-amasị ọtụtụ ndị egwuregwu. N'aka nke ọzọ, ọ dị mkpa ịzụta steroid sitere n'aka onye na-ere ahịa na-atụkwasị obi ma nwee ahụmahụ nke na-enye ngwaahịa dị mma tinyere nnyefe oge.
2. Dihydroboldenone / DHB usoro onunu
Usoro DHB kachasị mma sitere na 300 ruo 400mg kwa izu maka ndị ọrụ nwoke. Ndị inyom na-egwu egwuregwu pụkwara iji ọgwụ ọjọọ ahụ mee ihe kamakwa ọ na-eji obere ogwu eme ihe. Maka ndị na-eme egwuregwu, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịmalite site n'iji ihe ndị na-adịghị ala azụ iji zere mmetụta ndị dị njọ dị ka ịmalite ịmalite ịme ụmụ. Ngwakọta maka ndị na-eme egwuregwu egwuregwu kwesịrị ịdị n'etiti 25 na 100mgs kwa izu. Otú ọ dị, maka ụmụ nwanyị na enweghi ahụmahụ efu na steroid nke anabolic, dọkịta nwere ike ịdata ya, wee rịa elu mgbe ọ gwụchachara ọkara. Otu ihe ahụ na-emetụtakwa ụmụ nwoke; mmalite kwesịrị izere dihydroboldenone dosages ma na-agakwuru onye dọkịta mgbe ọ na-ebuwanye ibu.
The Dihydroboldenone ugboro ugboro na-adabere na ester dị na mmanụ ahụ, ma nke ahụ adịghị emetụta dosages. Ka ọ dị ugbu a, cypionate bụ ester kachasị eji eji ọgwụ a eme ihe. Ụdị azịza ụmụ nwoke na-agbaso site na 200mgs na 400mgs kwa izu n'agbanyeghị na ester gụnyere. Dika dọkịta gị ga-eduzi gị iji jide n'aka na ị na-akwado ọkwa ndị dị mkpa maka nsonaazụ kacha mma. Mgbe a na-eji ọnụ ekwu okwu, a ga-ejikarị ọgwụ ahụ na-eme ihe mgbe niile karịa onye a na-atụgharị. Dihydroboldenone dị ike na ọdịdị ya ma nwee obere ndụ.
N'aka nke ọzọ, usoro onu ogugu enweghi ihe kpatara ya n'ihi na ọ bụghị methylated na nke na enyere aka ichebe ya ka ọ ghara imebi imeju ya. Mgbe ị na-ahọrọ ụdị dihydroboldenone injectable, nanị 100-200mgs kwa izu ga-ezuru maka nsonaazụ kacha mma. Cheta, na ndị na-ahụ maka ahụike ga-edozi ọgwụ ndị na-edozi ahụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere nkà n'ime ya, ị nwere ike ịbanye onwe gị. Adịla n'ihe ize ndụ ma ọ bụrụ na ị maghị maka ya iji zere nsogbu ọzọ.
Mgbe ụfọdụ, dọkịta ahụ nwere ike ịmanye ịbawanye ma ọ bụ belata usoro ọgwụgwọ mgbe ị nyochachara ọnọdụ ahụike gị. Ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-emehie ụzọ n'ịzụta ọgwụ ahụ kpọmkwem site n'ahịa ma jiri ya na-enweghị metụtara dọkịta. Ụmụ mmadụ dị iche iche ma ọ bụ naanị na ngwaahịa na-arụ ọrụ maka enyi gị apụtaghị na ọ ga-ezu oke maka gị. Ụfọdụ ndị mmadụ ga-achọ akwa dosages maka mmalite mgbe ndị ọzọ na-adịghị ala dosages ga-zuru okè. Na-agụnye dọkịta gị, onye nkụzi gị, na onye na-edozi ahụ maka ịmị mma. Mgbe ụfọdụ, usoro ihe ndị na-emeputa kwuru nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ maka gị ma ọ bụ kpatara nsogbu ndị siri ike.
3. Dihydroboldenone / DHB okirikiri
Ọtụtụ, ọtụtụ ndị ọrụ na-amalite usoro cycles na ụbụrụ ọnụ tupu ha etinye ya na 400-500mgs nke DHB kwa izu na testosterone ester ogologo. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya na-agụnye onye na-eme ihe aromatase n'ime mgbatị DHB iji dozie estrogen si testosterone. Ọzọkwa, ị nwere ike iji mgbakwunye nkwado dị ka N2Guard. Gaa dọkịta gị ka o nwetakwuo ihe ọmụma yana ịmepụta usoro kachasị mma dịka mkpa gị ma ọ bụ rịọrọ. Ụfọdụ cycles nwere ike ịdị ogologo oge karịa ndị ọzọ, dabere na ọkwa ojiji nke onye na-eme egwuregwu. Ndị na-arụ ọrụ hardcore na-enwe ọganihu dihydroboldenone dị ogologo karịa ndị na-amalite. Mbelata nke ịkụ na ịmepụta ihe dị iche iche dị iche iche, a na-ejikọta ha na ogige dị iche iche. Ọ bụrụ na ị mezue okirikiri ahụ ma ghara ịchọta nsonaazụ ọchụchọ maọbụ na ị nwere mmetụta dị njọ, gwa dọkịta gị.
The DHB pụta na ị ga-adabere n'otú ị si eji ọgwụ ọjọọ na otu i si eso ya na ihe ndị ọzọ dị mkpa dị ka mgbatị na nri. N'ihi na ndị na-eji ya nke ọma na-enweta ezigbo nsonaazụ ma rụpụta mmetụta ha chọrọ. A naghị ewere dihydroboldenone dị ka otu n'ime steroid anabolic n'elu, ma ọ na-enye nsonaazụ ọma maka ọtụtụ ndị ọrụ. A maara ọgwụ maka enyere ndị ọrụ aka ịzụlite akwara siri ike ma sie ike. Ihe mgbaru ọsọ nke onye ọ bụla na-arụ ọrụ bụ ịmịkọrọ akwara na-eme ka ha nwee ike ịlụ ọgụ n'ụzọ dị irè. Dihydroboldenone bụ steroid nke na - eme ka uru ndị ọrụ na - arụ ọrụ n'ime oge kachasị anya. Ịnweta usoro onunu ogugu ya na nkwado nkwado ga-abụ echiche dị oke mma iji nweta nchọta ọchọrọ.
Ọgwụ ahụ na-eme ka ike mmadụ dum nwee ume nke ga-enyere ndị egwuregwu aka ịrụ ọrụ ruo ogologo oge ma nweta ahụ ike. Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ maka onye ọ bụla na-eme egwuregwu ga-enwe ihe ịga nke ọma na ọrụ ya, nke ahụ bụkwa kpọmkwem ihe dihydroboldenone na-enye. Ọtụtụ n'ime ndị na-eme egwuregwu na-eji ọgwụ a eme ihe nzaghachi dị mma ma na-eto ya maka ịme ka ha merie utu aha dị iche iche mgbe ha rụchara nke usoro ọgwụgwọ. N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị na-eme egwuregwu enweghị mmeri n'ihi enweghị ike, mana nke ahụ bụ nsogbu nke a ga-edozi site na oge ị ga-agwụcha DHB. O b ur u na i nwegh i ihe ga-eme mgbe i ch or o, gwazie dọkịta gi ka o nyere gi aka. Ihe ndị ọzọ ga-esi na ya pụta bụ mmetụta ndị dị na ya ma ọ bụrụ na ịchichapụ ma ọ bụ gaa megide ntụziaka nke dọkịta ahụ.
5. Dihydroboldenone / DHB mmetụta utịp
1-Testosterone (65-06-5) bụ steroid kachasị mma nke gbanwere site n'oge ruo n'oge iji welie uru ya ma belata mmetụta ndị dị na ya. Otú ọ dị, n'ihi mgbagwoju anya nke ahụ mmadụ, ọtụtụ ndị ọrụ nwere mmetụta dị iche iche mgbe ha jiri steroid. Mgbe ụfọdụ, ndị ọrụ na-enweta mmetụta ndị ahụ ozugbo ha na-amalite usoro ọmụmụ ha, ya mere, ọ dị mma ịkọrọ dọkịta gị oge. Dọkịta ahụ nwere ike belata usoro onunu ogwu ma ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ ya / ya nwekwara ike ịkwụsị usoro dum. N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị ọrụ na-ahụ mmetụta ndị ahụ mgbe emesịchara gwụchaa. Lee ụfọdụ n'ime nkịtị dihydroboldenone mmetụta dị n'akụkụ;
Mmegbu na-egbu mgbu - ọtụtụ ndị na-eme mkpesa na-eme mkpesa banyere ihe mgbu na mpaghara ogwu ahụ nke nwere ike ịga maka ihe dị ka otu izu. N'ezie, nke a bụ otu nsogbu nkịtị kachasị ọtụtụ ndị na-ahụ maka ahụ na-eche ihu mgbe ha na-aga maka steroid injectable. Otú ọ dị, ị nwere ike ịgbanwee na usoro onu ogugu, ọ bụ ezie na ọ kaghị ike iji ya tụnyere onye injectable. N'iburu n'uche usoro ịghapụta ọgwụ nke ị ga-enweta, mgbe ahụ, ihe mgbu agaghị egbochi gị inweta ihe mgbaru ọsọ gị.
Ntutu afụ ụfụ: mgbe ụfọdụ mgbe a na-aṅụbiga mmanya ókè, steroid nwere ike imetụta uto gị. Otú ọ dị, ịkpọtụrụ dọkịta gị na oge nwere ike inyere aka ịchịkwa nsogbu ahụ. Mmetụta ndị ọzọ na-agụnye, shrinking testicles, na-akpata imebi imeju na emetụta obi gị na imeju ọrụ. Ihe ndị a na-emekarị maka ndị na-akwagbu steroid ma ọ bụ jiri ya na-enweghị nyocha ahụike. Mgbe ụfọdụ, ọnọdụ ahụ nwere ike ime ka ụba mmetụta ndị ọzọ pụta.
N'ime ndị inyom, steroid nwere ike iduga na mmepe nke àgwà ndị nwoke dị ka mmụba ahụm na mmụba nke olu n'etiti ndị ọzọ. Ya mere, ndị inyom kwesịrị iji nlezianya jide steroid a ma jigide ntụziaka iji ejizi nsonaazụ nke ọma. Ihe kachasị njọ na steroid a bụ na nsonaazụ ahụ adịghị ngwa ngwa, nke pụtara ịhapụ ya taa nwere ike ọ gaghị egosipụta mmetụta, ma ị nwere ike ịnweta ha n'ọdịnihu. Ma eleghị anya, nke a bụ ihe mere ọtụtụ ndị na-eji ọgwụ steroid eme ihe na-ejighị ya mee ihe. Ọ bụrụ na ịrapagidesi ike na ntuziaka ndị eji eme ihe, ị ga-anọ n'akụkụ nchebe.
6. Dihydroboldenone / DHB ọkara ndụ
DHB na-ejikọta ya na cypionate ester nke na-eme ka ndụ DHB dịkwuo ndụ banyere 8-10 ụbọchị, ọ bụkwa ya mere eji etinye ọgwụ ahụ mgbe ọ bụla 4 ma ọ bụ 6 ụbọchị. Dọkịta gị ga-emepụta usoro ahụ ma dozie oge kachasị mma na-adabere na ester tinyere na nchọta ọchọrọ. Mgbe ị gwụchara, DHB na-anọgide na-arụsi ọrụ ike na ahụ gị maka ihe dịka izu 5 tupu ya apụ kpamkpam site na usoro ahụ gị. Oge a ga-ewepụkwa na usoro ahụ ga-adabere na ester dị na DHB. Ya mere, ọ bụrụ na ị ga-asọmpi na asọmpi nke na-adịghị ekwe ka iji steroid, kọọrọ dọkịta gị, inye ọgwụ kachasị mma nke ga-apụ n'ime obere oge o kwere mee.
Ogwu DHB oral nwere obere obere ndụ ma ghara ịdị ike karịa onye ahụ. Ya mere, ọgwụ a na-ekwu okwu ya ga-aga n'ihu na ị ga-eme ọtụtụ ugboro ka ọ bụla kwa ụbọchị ka ị nweta ihe ndị a chọrọ. Otú ọ dị, ndị na-arụ ọrụ n'ahụ na-agakarị iji ọgwụ na-agwọ ọrịa n'ihi na o nwere ike nakwa na ọ ga-abụ na ị gaghị efu usoro ọgwụgwọ dị ntakịrị. Naanị ị ga-achọ ịgbanye ọgwụ ozugbo otu izu. Ọ bụrụ na irughị gị ala na injections, ị nwere ike ịgwa dọkịta gị ka o nye gị usoro onu ogwu.
7. Dihydroboldenone / DHB maka ịcha
Mgbochi DHB n'iji aru na-enyere aka wepu abụba anụ ahụ na-adịghị mkpa ma ọ bụ nkwụsị mmiri n'ime akwara na-eme ka ị nweta ahụ ike. N'ebe a, ihe mgbaru ọsọ gị bụ ịkwụsị ọtụtụ pound dịka i nwere ike ime ma nweta ahụ ike gị ma ọ bụ ọdịdị ahụ gị. DHB enyerela ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu n'emekere ntutu ha, ọ bụkwa ya mere o ji bụrụ onye na-ewu ewu n'etiti ndị na-eme egwuregwu. Mgbe ịkwado ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ọ na-ere abụba ndị na-emebiga ihe ókè ma na-ekpuchi ahụ niile ahụ. Icha ihe na-enye aka n'inyere ndị bodybuilders aka iji nweta ọdịdị ahụ na ike ike. Gaa dọkịta gị, ka o nye gị mgbatị DHB kacha mma ma dị irè.
8. Dihydroboldenone / DHB maka bulking
N'ebe a, ị na-achọ inweta nsị na arọ. DHB nwere ihe ndị dị ịtụnanya na-eme ka ọ dị mma maka ndị na-eme egwuregwu karị ka ndị bodybuilders. Dihydroboldenone bulking okirikiri na-agụnye ịbịakarị dosages kwa izu dịka 400 ka 500mgs na nri kwesịrị ekwesị. Onye na-ahụ maka steroid nwere ihe ndekọ dị egwu nke na-enyere ndị na-eme egwuregwu aka inweta ogo na ahụ ike. Cheta na ị na-ele nri gị ma na-arụ ọrụ maka nsonaazụ dị mma. The Ultimate Guide to Stanozolol (Winstrol) maka Bodybuilding
Ugboro ole nke DHB bulking a ga-ekpebi usoro onyonyo site na ester na-etinye ya na ya. Dọkịta gị ga-anọ n'ọnọdụ kachasị mma iji dozie ihe ndị kwesịrị ekwesị maka gị. Dabere na ngwongwo gị ma chọọ dọkịta ahụ ga - ekpebi ihe mgbakwunye nkwado ndị ga - enyere gị aka inweta ihe ndị a chọrọ. N'ime ụmụ nwanyị, otu usoro ahụ ga-emetụta ya, ma a ga-etinye ihe ndị na-egbochi ya iji zere mmepe nwoke.
9. Dihydroboldenone / DHB uru
DHB bara uru nye ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ya karịsịa ndị ọkachamara bodybuilders. Ọgwụ ahụ na-apụta dị ka otu n'ime ndị nwere ike anabolic steroid ọ bụ ezie na ọ na-adịghị họọrọ na ndị ọzọ a ma ama ụdị. N'akwụkwọ, ọgwụ ahụ yiri ka ọ dị obere, ma ndị ji ya na-akọ akụkọ ọma. DHB na-eme ka uru ahụ na-eme ka ọkpụkpụ ahụ nwee ume. Ndị na-eme egwuregwu na-ewere steroid iji nyere ha aka ịzụlite ahụ ike ma nweta ike ịsọ mpi nakwa ịrụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi. Site nyocha ndị ahịa na nhazi dị iche iche, DHB adịghị emechu ihu. Ọtụtụ ndị ọrụ na-ekwu na ọganihu ha na-arụ ọrụ egwuregwu a.
Tụkwasị na nke a, dihydroboldenone adịghị akwalite ntinye mmiri n'ime akwara ma ọ bụ aromatize. Ya mere, mgbe ị na-aṅụ ọgwụ ahụ, ị ​​ga-ejide n'aka na ị ga-enweta mọzụlụ dị mma ma bepụ abụba ndị na-abaghị uru. Maka ịkwado, ọgwụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na mgbakwunye ndị ọzọ. Mgbe ị na-egbutu ma ọ bụ na-ebugharị oge, ị nwere ike ijide n'aka na steroid ga-enye nsonaazụ kacha mma.
DHB nwekwara mmetụta dị ole na ole ma e jiri ya tụnyere ndị steroid ọzọ nke na-eme ka ọ dị mma maka ndị na-eme egwuregwu na ndị ọkachamara bodybuilders. Ndị na-eme egwuregwu na-enwe ike iji steroid ma ọ bụrụ na ọ dị ala; ọ na-enye otu mmetụta ahụ. Ndị na-eme egwuregwu na-eji ọgwụ a eme ka ọrụ ha dịkwuo mma na ime ka ike ha dịkwuo mma. A gwara ndị inyom ka ha kpachara anya ka ha na-eji ọgwụ a. Ndị ọkachamara na-atụ aro na ndị inyom dị ime kwesịrị ịtụle ịhapụ onye steroid a n'ihi na ọ nwere ike imetụta nwa e bu n'afọ.
Dihydroboldenone dị n'ụdị oral na injection. Ya mere, na-enye ndị ọrụ ahụ usoro nhọrọ. O b ur u na i nwegh i ihe na-ad igh i mma n'ihi ihe nd i mmad u na-eme n'ihi ihe mgbu i nwere ike ich op uta on u on u. Ọtụtụ ndị na-eme mkpesa na mmechi DHB na-egbu mgbu, ihe mgbu mgbe ụfọdụ na-adịru ọbụna otu izu, ọnọdụ nke na-egbochi ụfọdụ ndị ọrụ.
Otú ọ dị, nke a ekwesịghị igbochi gị inweta ihe mgbaru ọsọ gị. Gwa onye dọkịta gị ka o nye gị ọgwụ ọgwụ ọnụ ọ bụ ezie na ị ga-ebu ya ugboro ugboro karịa ihe a na-atụgharị uche. N'aka nke ọzọ, a pụrụ ịchịkwa ọtụtụ akụkụ mmetụta dihydroboldenone site na ịgbaso ntụziaka dọkịta. Na nkenke, ọ dịghị ihe na-echegbu onwe gị mgbe ị na-eji steroid a, ọ bụrụhaala na ị gụnyere ọkachamara ahụike na usoro dum.
10. Dihydroboldenone / DHB nyocha
Dihydroboldenone anatawo nzaghachi dịgasị iche na nyocha DHB site na ndị ahịa dị iche iche. Ụfọdụ bodybuilders enyewo ya ọkwa magburu onwe ya ebe ndị ọzọ na-eme mkpesa na ha agaghị enweta ihe ha chọrọ. Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-eme egwuregwu na-eji steroid ruo ogologo oge nwere obi ụtọ ma kwuo na ọganihu dihydroboldenone. N'ileghachi anya na nyocha dị iche iche nke ngwaahịa, o doro anya na ọtụtụ ndị ọrụ na-enwe afọ ojuju na nsonaazụ ndị ọgwụ ahụ na-enye. Ụfọdụ ndị ọrụ na-enwe obi ụtọ na ha nweta ogo ahụ dị mma ma nwee ume ike zuru oke. N'aka nke ọzọ, ụfọdụ ndị na-eche na ọgwụ ahụ nwere ụdị thermogenic yiri nke trenbolone nke na-agụnye na-akpata ehighi ura mgbe ụfọdụ ma na-asụgharị.
Tụkwasị na nke a, ndị na-eme egwuregwu dị iche iche na-egosipụta ọṅụ ha ebe ọ bụ na ngwaahịa ahụ adịghị emerụ ahụ agụụ, si otú ahụ na-eme ka ọ bụrụ ihe mgbakwunye dị mma maka usoro mmechi. E nwere ndị na-akọ akụkọ ntukwasi obi na ọgwụ ahụ ka ọ na-agbakasị ahụ mgbu. Ụfọdụ ndị ọrụ dihydroboldenone na-azọrọ na ha ga-azụ ahụ mgbu ahụ maka ihe dịka ụbọchị 7. Ihe mgbu mgbu ahụ bụ ihe nkịtị ma nwee ike ịchịkwa ya ma ọ bụrụ na ị gwa dọkịta gị na oge.
Dịka e kwuru na mbụ, ahụ mmadụ na-eme ihe dịgasị iche iche na ngwaahịa dị iche iche karịsịa ndị steroid. Ụfọdụ ndị na-enwe obi ụtọ na injections mgbe ndị ọzọ na-eche iru ala. Mmetụta ndị ọzọ na-abụkwa nchegbu dị ịrịba ama nke ọtụtụ ndị ọrụ kpatara. E nwere ndị na-eme mkpesa banyere isi isi ọwụwa, ehighị ụra nke ọma, na ịṅụbiga mmanya ókè. Enwere ike idozi nsogbu ndị a niile ma ọ bụrụ na ị gaa maka nlekọta ahụike tupu ịmalite iji steroid na-eme nyocha mgbe niile ka ị na-aga n'ihu na usoro gị. Dịka ụbụrụ ndị ọzọ anabolic, dihydroboldenone na-ebelata. N'ihi ya, a ghaghị ime usoro ọgwụgwọ na-aga n'usoro kwesịrị ekwesị (PCT), kwadoro ihe mgbakwunye dị mkpa ka e tinye ya na cycles.
11. Dihydroboldenone / DHB maka ire ere
Dịka ọkachamara na-eme egwuregwu, ị gaghị etinye aka n'ọrụ gị site na ịzụta DHB maka ire ere n'aka ndị na-ereghị ụgwọ na ndị na-enweghị atụ. Nanị ụzọ isi nweta ngwaahịa dị mma bụ site n'inweta ha site n'aka onye nrụpụta ma ọ bụ onye na-ere ahịa. Ugbu a, ahịa jupụtara na ọtụtụ steroid na-ere ahịa na ụdị ma na-na n'akụkụ nchebe; ịkwesịrị ịiche ọdịiche dị n'eziokwu ahụ site na adịgboroja. Ụfọdụ ngwaahịa na ahịa nwere ike ọ gaghị adị mma n'ahụ gị. Anyị bụ ndị nrụpụta DHB kasị mma na soplaya. Anyị na-emepụta mgbasa ozi n'ụwa dum, naanị gị ga-eme ka ịdebe gị na weebụsaịtị anyị, anyị ga-anapụta n'ime oge kachasị oke mgbe o kwere omume. Anyị ghọtara na uru ego bara bụ isi. Ya mere, ọnụahịa anyị nwere ezi uche adịghị emetụta àgwà ngwaahịa anyị.
Na BUYAAS, ị nwere ike Zụrụ DHB na nnukwu ma ọ bụ ọbụna na-eme ka izu zuru oke maka oge ị ga-esi na nkasi obi nke ụlọ gị. Anyị nwere ụzọ ịkwụ ụgwọ iji kwado ndị ahịa anyị niile. Ịzụ ahịa na anyị na-enye gị udo nke uche, ị ga-ejide n'aka na ị ga-enweta ihe ị chọrọ. Anyị na-enye ndị ahịa anyị ndụmọdụ mgbe nile iji mee nchọpụta ahịa ma ha ebute maka onye na-ere ahịa DHB. Gaa maka mmepụta Dihydroboldenone / DHB a ma ama dị ka BUYAAS n'oge niile. Cheta na ndị steroid nwere ike ịkpata mmetụta ọjọọ na ahụ gị ma ọ bụrụ na ị na-ewetu ogo ma ọ bụ ma ọ bụ na ọ bụrụ na ịkwadoghị ya. Enwere ọtụtụ ọgwụ ndị na-abaghị uru, ma ọ bụrụ na ị chọghị ịma, ị nwere ike ịdaba n'ọnyà ha dị ka ngwaahịa dị ọnụ ala karịa ndị ezigbo.
Ebe nrụọrụ weebụ anyị bụ enyi-enyi; ya mere ị nwere ike ịzụta Dihydroboldenone / DHB ngwa ngwa site na PC, laptọọpụ ma ọ bụ smartphone. Anyị na-arụpụta ụdị steroid dị iche na iche dihydroboldenone.
Cheta na ị nwekwara ike ịzụta Dihydroboldenone ntụ ntụ site na weebụsaịtị anyị. Otú ọ dị, anyị na-agba ndị ahịa anyị ume ịghọta iwu nke ala banyere ngwaahịa ọ bụla ha zụrụ site na ikpo okwu anyị. Ụfọdụ mba na-edozi ma na-achọ ka ikike ma ọ bụ ọgwụ dọkịta tupu ịbịnye ma ọ bụ ịzụta ụfọdụ steroid. Na nchịkọta, anyị bụ ndị isi Zụrụ Dihydroboldenone suppliers n'ụwa nile, na ngwaahịa anyị niile ekwenyela ma kwadoro ya site n'aka òtù ndị ọrụ zuru ụwa ọnụ. Jiri nlezianya hụ na ị ga-aga maka nyocha ahụike tupu ịmalite iji ngwaahịa anyị iji zere inwe mmetụta dị njọ
12. Dihydroboldenone / DHB (1-Testosterone) maka ozubu
DHB aghọwo ihe dị oké mkpa na ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ma gosipụta na obi abụọ adịghị ya na ọ nwere ike ịnapụta ihe ọ na-eme. Dịka ọmụmaatụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị egwuregwu niile na-eji DHB ekwu akụkọ ọma. Ọgwụ ọjọọ na-eme ka ahụ ike na-eme ka ahụ dịkwuo mma, meekwa ka ọ dịkwuo mma. Ekelewo Dihydroboldenone maka ọrụ ya na machibido ma na-agbaji usoro ntiri. Mgbe ị na-eji ọgwụ ọjọọ a eme ihe, ọ nweghị ihe kpatara ị ga-echegbu onwe gị banyere nkwụsị mmiri na aromatization n'ihi na ọ naghị ebute nsogbu ọ bụla. Mmetụta ndị ọzọ na-abaghị uru ma e jiri ya tụnyere ndị steroid ndị ọzọ, ya mere, ọ dị mma ịga mgbe ị na-eme iwu gị taa.
Isoro okirikiri gị na nri kwesịrị ekwesị na mgbatị ga-abụ echiche kachasị mma iji rụpụta nsonaazụ ọma. Ọgwụ ahụ adịghị emetụta agụụ gị, nke pụtara na oge ịmepụta oge ị nwere ike inwe nri kwesịrị ekwesị n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ichegide usoro ọgwụgwọ ziri ezi bụkwa ihe ọzọ ị ga-echebara anya, mgbe ị nọ na ya. Onye na-enye gị ọzụzụ na dọkịta gị bụ ndị kachasị mma iji duzie gị n'oge njem gị. DHB nwere ihe pụrụ iche nke na-enye gị ike, nke siri ike ma na-adabere na ọchịchọ ọ bụla nke anụ ahụ. N'ime oge mgbawa, ịkwado steroid na ihe mgbakwunye ndị ọzọ ga-enyere aka na-echekwa abụba anụ ahụ achọghị. Dihydroboldenone na-arụ ọrụ nke ọma na mgbakwunye nkwado ndị ọzọ, na ọkara ndụ ga-adabere na ester ahụ.
Enweghị ihe mere ị ga-eji chee na ike DHB dịka ọ dị ịtụnanya maka ndị ọrụ niile tụkwasịrị ya obi. Ọ bụ ezie na nsonaazụ ahụ adịghị ngwa ngwa, site na njedebe nke usoro ahụ, ị ​​ga-enwe obi ụtọ akwara ma nweta ume iji were gị n'oge ọzụzụ yana ịgba mpi n'ụzọ dị irè. Ọ bụrụ na ị na-ekere òkè na asọmpi nke na-adịghị ekwe ka iji steroid, ị nweghị ihe ọ bụla ị ga-echegbu onwe gị, dị ka ihe dị iche iche na-apụ n'ahụ gị mgbe ihe gbasara izu 5 gasịrị mgbe ị gachara. Ya mere, ịhazi oge dị mma na ileba anya na ọrụ gị na-eto eto.